UN-ka oo ka digay xasuuq ka dhaca Ciraaq - BBC News Somali
Sarkaal sare oo Qaramada Midoobay ka tirsan kuna sugan Ciraaq, ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabo deg deg ah oo looga hortago, suuragalnimada xasuuq lagu sameeyo xubno ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee Turkmen, kaasi oo kaga yimaada kooxda khilaafada Islaamka.
Nickolay Mladenov ayaa sheegay inuu galay dareen qatar ah, wararka sheegaya wax uu ugu yeeray dhib aan laga hadli karin oo haysta dadka deggan magaalada Amerli, kuwaasi oo la hareereeyay lagana go'doomiyay cuntada iyo sahayda biyaha ku dhawaad labo bil.
Wuxuuna ku adkeeyay xukuumadda Ciraaq inay sameyso wax kasta oo ay go'doonka ku qaadeyso. Isagoo sidoo kale sheegay dalalka isbahaysiga la ah Ciraaq iyo bulshada caalamka inay la shaqeeyaan mas'uuliyiinta Ciraaq si ay uga hortagaan musiibo bani'aadamnimo.
Dad Yazidi ah oo lagu laayay Ciraaq
16 Agoosto 2014